ကျတော့်ရဲ့ blog လေးကို လူသိများအောင် link တင်ထားပေးသူများကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျား... အထူးသဖြင့် မဒီဂျွန် နဲ့ ကိုညီလင်းဆက် ကို ပိုပြီး အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်... ၀င်ရောက် ဖတ်ရှုနေသူ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ အပေါင်းအားလည်း အထူးအထူး ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြောကြားပါရစေဗျာ... မောင်လှ ဟာ ငပျင်းပါ... မောင်လှ အသစ် အသစ်တွေ မတင်နိုင်တဲ့ အချိန်ကာလများမှာ ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုသူတွေကို အရမ်းအားနာတယ်ဗျာ... မောင်လှ ပေးတဲ့ သတင်းတွေ မှာ သတင်းအမှားတွေပါလာရင် ပြည်သူထဲကထွက်လာတဲ့ ကောလဟာလလို့ပဲ သတ်မှတ်ပေးကြပါ... ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မောင်လှဟာ သတင်းထောက် တစ်ယောက်မဟုတ်လို့ပါပဲ...
အင်တာနက် သုံးဖို့ အခွင့်အလမ်း ရှိနေသ၍ မောင်လှရဲ့ စိတ်ထွက်ပေါက်တွေ ၊ မန္တလေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေ ၊ အတင်းတွေ ၊ မောင်လှ အာရုံရသလို လုပ်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင် ရေးသားနေဦးမယ်ဆိုတာ အသိပေးရင်း သူငယ်ချင်း ရောင်းရင်း အပေါင်းတို့ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းပါခင်ဗျား...
P.S. Search Engine ထဲကရှာဖွေပြီး လာရောက် ဖတ်ရှုသူများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပါ... အားမလို အားမရ ဖြစ်ကြရင် မောင်လှကို ဆဲဆိုနိုင်ကြောင်းပါ...
နောက်ဆုံး မြန်မာသတင်းနဲ့ မန်းသတင်းတွေ အကို့ဆီက ကြားနေရတာတောင် ကံကောင်း။
နောက်ခံဘက်ဂရောင်လေးနဲ့ website design လေးက ရှင်းပြီး အရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ မြန်မာလည်းဆန်တယ်။
အစွဲအလန်းကြီးတဲ့မန်းတလေးသား ဆိုတာလေး ဘာလို့မထည့်တော့တာလဲ. အဲဒါလေးကို သဘောကျမိတယ်။
မန္တလေးသားဆိုတဲ့ အစွဲအလမ်းကြီး ခဏ ဘေးချိတ်ထားလိုက်ဦးမယ်...